द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिई राज्य उम्किने ठाउँ छैन | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिई राज्य उम्किने ठाउँ छैन
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय नदिई राज्य उम्किने ठाउँ छैन
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता March 28, 2018	0 185 Views
सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गका सदस्य
द्न्द्कालमा मारिएका, बे पत्ता पारिएका, अंगभंग तथा सम्पत्ति क्षति भएका र द्वन्द्व प्रभावितहरुलाई उचित न्याय, परिपूरण दिनका लागि सरकारले आयो ग गठन गरे को पनि धे रै भइसक्यो  । आयो गका पदाधिकारीले एक कार्यकाल त्यसै बिताइसके  । पीडितलाई न्याय दिने सवालमा खासै काम हुन नसके पछि उनीहरुको कार्यकाल एक वर्ष लम्व्याइएको छ । म्याद थपिए लगत्तै सत्यनिरुपण आयो गले परिपूरण नीति निर्माणका लागि सुझाव संकलन थाले को छ । यसै सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितका उजुरी, त्यसमाथि छानबिनका विषयमा सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गका सदस् य एवं पाँच नम्बर प्रदे श संयो जक श्रीकृष्ण सुवे दीसँग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहॉ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
सत्यनिरुपण गनेर् काम कहा पुग्यो  ?
अहिले त हामी उजुरी छानबिनकै चरणमा छांै  । उजुरी लिने काम गत वर्ष नै सकिएको हो  । बिते को एक वर्ष ती उजुरीलाई व्यवस् िथत गनेर् , कम्प्युटरमा अभिले ख राख्ने काम भयो  । त्यसपछि दे शका सातवटै प्रदे शमा प्रदे शस् तरीय मुकाम कार्यालय राखे र उजुरीको छानबिन प्रक्रियामा लागे का छौ ं । अहिले हरे क प्रदे शमा एक हजारदे खि १२ सयसम्मका उजुरीको छानबिन एकै साथ अघि बढिरहे को छ । जसमा आठ हजार पा“चसय भन्दा बढी उजुरीहरुमाथि छानबिन भइरहे को छ ।
बाकी उजुरी कहा थन्किएका छन् ?
पहिलो कुरा त उजुरीमाथिको छानबिन आफै मा अप्ठे रो विषय हो  । यसका लागि विज्ञ जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । स्रो त साधनको हिसाबले पनि निकै खर्चिलो छ । छानबिनका क्रममा पीडितहरुलाई बो लाउ“दा आते जाते खर्च सबै आयो गले नै व्यहो र्नुपर्छ । यी सबै कुराहरुको बस् दो वस् ती गर्न नसक्दा काममा अलि ढिलाइ भएको हो  । तर तीन हप्ता अघि मात्रै आयो गले सबै जिल्लामा अहिले कै स् तरको छानबिनका लागि मुकाम खडा गनेर् भन्ने निर्णय भइसके को छ । त्यसै ले अब उजुरीको छानबिन तीब्र गतिमा हुन्छ । यही काम अघि पनि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्ला । मै ले माथि पनि भने ं मुख्य कुरा स्रो तको कुरा हो  ।
अघिल्ला सरकारहरुले आयो गलाई चाहिने त्यस् ता खालका स्रो त र साधनको व्यवस् था गर्न नसक्दा एकै चो टी काम गर्न नसकिएको हो । यसपटक आयो गकै एक वर्षको म्याद थप भइरह“दा हामीले सरकारसग शर्त राखे का थियौ ं । आयो गलाई आवश्यक ऐ न, नियम संशो धन गनेर् हो भने आयो ग काम गर्न तयार छ तर पहिले कै अवस् थामा म्याद थपिरहनुको कुनै औ चित्य छै न भने का थियौ ं । सा“च्चिकै काम गनेर् वातावरण हुनुपर्छ भन्ने शर्त राखे को कारणले सरकारले पनि आयो गका काम नै पहिलो प्राथमिकताको काम हो भन्ने कुराको महसुस गदैर् आयो गलाई चाहिने सबै सहयो ग गनेर् सरकारले प्रतिवद्धता जाहे र गरे पछि हामीले सबै जिल्लामा मुकाम राखे र छानबिन अघि बढाउने निर्णय गरे का छौ ं । अझ एक हजार भन्दा धे रै उजुरी हुने जिल्लामा दुईवटासम्म मुकाम राखे र छानबिन गर्न सक्ने व्यवस् थाको तयारीमा हामी छांै  । एक महिनाभित्रै हामी सबै तयारी गरे र सबै जिल्लामा मुकाम खडा गरे र छानबिन अघि बढाउ“छौ ं ।
ढिलो मा नया वर्षदे खि काम शुरु हुन्छ ?
नया“ वर्ष कुर्नुपदैर् न । अबको एक महिनापछि शुरु भइहाल्छ । अकोर् वर्ष लाग्दा त हामीले उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन सक्ने लक्ष छ । किनभने आयो गमा ६२ हजार उजुरी परे का छन् । त्यो हिसाबले हामीले सवा सय जति छानबिन टो ली गठन गर्नुपनेर् छ । एउटा टो लीलाई औ षतमा एक हजार भन्दा कम उजुरी पर्छन् । त्यसले गर्दा छ÷सात महिनामा उसले प्रारम्भिक चरणको छानबिन सक्छ भन्ने हो  । त्यस्तै के न्द्रमा पनि विस् तृत छानबिन टो ली बनाउ“दै छांै  । कतिपय सदस् यहरुकै ने तृत्वमा कतिपय विज्ञहरुको ने तृत्वमा । विस् तृत छानबिनको काम के न्द्रबाट हुन्छ र प्रारम्भिक छानबिनको काम मुकामबाट जिल्लामा । अझ कतिपय धे रै उजुरी भए त गाउ“पालिकास् तरबाट पनि छानबिन गनेर् हाम्रो तयारी छ ।
स्रो त साधन नभएकै कारण हो त हिजो ढिलाइ भएको  ?
हो  । स्रो त साधन र राज्यले आयो गलाई गर्नुपनेर् व्यवहारकै कारणले कामले गति लिन नसके को सत्य हो  । यो तीन वर्षको समयमा सामान्य मूल्यांकन गर्नुभयो भने पनि नियमावलीबिना हामीले उजुरी लिन मिल्दै नथ्यो  । आयो ग गठन भएको १४ महिनापछि नियमावली पाएका छौ ं । त्यसपछि आयो गलाई चाहिने जनशक्ति पाउन एक, डे ढ वर्ष थप ढिला भयो  । म दुःखका साथ भन्न चाहन्छु, यो सातवटा मुकाम खडा गनेर् भन्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन पनि आठ महिना पर्खिनुप¥यो  । आठ महिनासम्म त स्रो त साधन नै पाइएन । अर्थले स् वीकृति दिने र बजे टको कुराले मात्रै यति लामो समय पर्खनुप¥यो  । अब आफै विश्ले षण गर्नुस ढिलाई के कारणले भयो भन्ने कुरा ।
फे रि पनि त्यस् तै समस् या हुदै न भन्ने ग्यारे न्टी भयो त अब ?
मुख्य कुरा राज्यको इच्छाशक्तिमा भरपनेर् कुरा हो यो  । आयो गका पा“चजना पदाधिकारी के ही पनि हो इन । पा“च जनाले गरे र सम्भव हुने पनि काम हो इन । मुख्य कुरा आयो गलाई चाहिने स्रो त साधन जनशक्ति ठूलो कुरा हो  । संसारमा यस् ता आयो ग असफल हुनुका कारणहरु ती पनि हुन् । तर यो एकदम खर्चिलो विषय हो  । धे रै विज्ञ जनशक्ति प्रयो ग गर्नुपनेर् विषय हो  । त्यसमा हामीकहा“ उपलव्ध नभएकै कारणले ढिलो भएको हो  । ग्यारे न्टी त के ही पनि छै न । यदि काम हुन सके न भने राज्यको जुन दायित्व हो द्वन्द्वपीडितलाई सम्बो धन गनेर् त्यो दायित्वबाट राज्य चुक्छ । राज्यको यो समस् या ज्यू“ का त्यू“ रहन्छ । त्यसलाई गम्भीररुपले ध्यान दिनुपर्छ ।
पीडितले न्याय पाउछन् उसो भए ?
हामी त पीडितले कुनै पनि हालतमा न्याय पाउनुपर्छ भने र लागे का छौ ं । आयो गको एक मात्र लक्ष भने को पीडितलाई न्याय दिने नै हो  । पीडितले न्याय नपाइकन कसै ले सुखै पाउदै न । त्यसै ले पीडितले न्याय पाउनुहुन्छ ।
तपाइहरुकै कार्यकालमा न्याय पाउछन् पीडितले  ?
कार्यकाललाई यसरी हिसाब गरियो भने त पहिले दुई वर्षको कार्यकाल हो  । एक वर्ष थपिएको छ । त्यो समय वै ज्ञानिक थिएन । किनभने हामीले सबै उजुरीलाई छानबिन गर्नुपनेर् बाध्यत्मक व्यवस् था छ । हामीले के ही प्रतिनिधिमूलक घटनाहरु छाने र काम गनेर् भए त हामीले अहिले पनि दुई हजार उजुरी छानबिन गरिसके का छांै  । जस् तो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयो गलाई नै हे नेर् हो भने पनि आयो ग गठन भएको १५÷१६ वर्षमा तीन÷चार जनाको कार्यकाल सकियो । अहिले सम्म सात हजार उजुरीको छानबिन भएको छ भने यत्रो वर्षमा त्यति ठूलो जनशक्ति प्रयो ग गर्दा त काम त्यति हुदो रहे छ भने हामी ६० हजार उजुरी दुई वर्षमा सिध्याउ“छांै र ? त्यसमा पनि राज्यको यति धे रै अपहे लनामा परे र । बेवास् ता भएर । पूर्णरुपमा यसलाई स्रो त सम्पन्न गराउने हो भने त ठूलो कुरा पनि छै न । तर त्यसका लागि सबै को इच्छाशक्ति हुनुप¥यो  । राजनीतिक दलहरुमा पनि काम गरौ ं परिणाम निकालौ ं भन्ने इच्छाशक्ति हुनुप¥यो  । हिजो का द्वन्द्वरत पक्षहरुले पनि यसबाट निकास लिने हो भन्ने खालको सहयो गी भावना हुनुप¥यो  । आयो गमा आएर बयान दिनुप¥यो  । उहा“ले सत्य कुरा बो लिदिनुप¥यो  । पीडितहरुले पनि यत्रो वर्ष पर्खिनुभयो  । के ही समय अब पनि धै र्यता गरे र आयो गलाई सहयो ग गरिदिनुभयो भने यो काम सम्पन्न हुन्छ । यो समस् या समाधान नगरी कसै लाई पनि सुख्खै छै न भन्ने कुरा सबै ले बुझ्नुपर्छ ।
के ही भएन भने पनि प्रारम्भिक चरणको छानबिन सक्नुहुन्छ ?
प्रारम्भिक चरणको छानबिनले धे रै काम सकिन्छ । प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाट हामीले पीडितलाई परिपूरणको बाटो , मे लमिलापलगायतका बाटो हरु खो ज्छौ ं । मै ले भनिसके ं प्रारम्भिक चरणको छानबिनबाट एउटा तथ्य स् थापित हुन्छ । त्यसलाई फे रि थप छानबिन गर्नुपनेर् भने को थो रै घटनामा गनेर् हो  । विस् तृत छानबिन गर्नुपनेर् भने र प्रारम्भिक छानबिन टो लीले सिफारिस गरे का घटनामा मात्रै विस् तृत छानबिन गरिन्छ । त्यसले गर्दा ती थो रै घटनाहरुको त के न्द्रमा के न्द्रीकृत एउटा संरचनाले पनि गर्न सक्छ । यद्यपि उसलाई पनि उत्तिकै स्रो त साधनको आवश्यकता त पर्छ नै  । त्यो तयारी आयो गले गरिरहे को छ । यताबाट प्रारम्भिक छानबिन सिध्याउ“दै जाने र सिफारिस भएकालाई विस् तृत छानबिन गनेर् यी दुबै तयारी भएकाले अब एक डे ढ महिनाभित्र चाहिं परिपूरण नीति सिफारिस गनेर् तयारीमा छौ ं । त्यही सन्दर्भमा हामी सुझाव संकलनका लागि दे शभरि हि“डे का छौ ं ।
पीडितहरुले सरकार जान्दै नन्, आयो गप्रति आशावादी छन् त ?
हो  । पीडितहरुको आशा भने कै आयो गमा हो  । सरकारस“ग त उहा“हरु धे रै लड्नुभयो  । यही आयो ग बनाउनुपर्छ भन्दै लड्नु भएको थियो  । अब आयो ग आइसके पछि उहा“हरुको भरो सा आयो गप्रति हुनु स् वाभाविक पनि हो  । त्यसै ले हामीले सरकारतिर फर्किनुस् भन्ने ठाउ“ पनि छै न । हामीस“गै हो आशा र खबरदारी पनि हामीलाई नै गनेर् हो  । आक्रो श पो ख्ने पनि हामीमाथि नै हो  । उहा“को आशा, खबरदारी, आक्रो शलाई सहर्ष स् वीकार गछौर् ं । किनभने यति लामो समयसम्म पनि कुनै काम हुन नसके पछि आक्रो श आउनु पनि स् वभाविक हो  । तर परिणाम निकाल्नका लागि समय लाग्छ । दे खिने गरी परिणाम नआउ“दासम्म के ही भएकै छै न जस् तो लाग्छ । यो जटिल प्रक्रिया भएकाले हामीले सबै पक्षलाई समे टे र काम अघि बढाएका छौ ं । पीडितहरुले पनि यो कुरा बुझ्नुहुने छ । मलाई के लाग्छ भने परिणाम आइसके पछि उहा“हरुले पनि भन्नुहुने छ ढिलै भए पनि काम भयो भने र । त्यो परिणामको शुरुवात एक डे ढ महिनापछि हामी निकाल्दै छांै  । त्यो भने को परिपूरण नीति सिफारिस गदैर् छौ ं ।
सुझाव संकलनको क्रममा हुनुहुन्छ, परिपूरण कस् तो हुनुपर्छ भन्ने छ पीडितहरुको  ?
परिपूरण नीति पनि के न्द्रमा बसे र सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो  । विज्ञहरु राखे र गर्न पनि सकिन्थ्यो  । के ही संघसंस् थाहरुले परिपूरणको एउटा ड्राफ्ट गरिसक्नु भएको पनि छ । तर परिपूरण पाउने त पीडितले हो नि । परिपूरण नीति बनाइरह“दा उसको सहभागिता भएन भने अपनत्व महसुस गदैर् न । उसको सहभागिता र सुझावमा मात्रै वास् तविक नीति बन्छ भने र हामी दे शव्यापीरुपमा सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरु बो लाएर राय संकलन गरिराखे का छांै  । यद्यपि यसलाई व्यापकरुपमा लान सक्नुपथ्योर्  । स्रो त साधनको कमी र समयकै कमीले पनि सबै जिल्लाका प्रतिनिधि राखे र मुकाम मुकाममा राय संकलन गनेर् काम गरिरहे का छौ ं । उहा“हरुका नजानिदो तवरले धे रै राम्रा सुझावहरु आएका छन् । हिजो विधायिकाहरुले ऐ न ड्राफ्ट गर्दाखे री यस् तो खालको परिपूरणको आयो गले सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने कुरा ऐ नमै उल्ले ख छ । सरकारले नियमावली जारी गर्दाखे री नियमावलीमा पनि धे रै बाटाहरु खुलाएको छ । सोचेभन्दा पनि फरक रहे र पीडितका वास् तविक आकांक्षा आएका छन् । त्यो धे रै राम्रो कुरा छ । जस् तो उहा“हरुले शिक्षा, स् वास् थ्य र रो जगारीमा बढी जो ड दिनुभएको छ । त्यो भन्दा धे रै सम्मान र सन्तुष्टिको कुरा उठाउनुभएको छ । राज्यले पै सा मात्रै दिएर हु“दै न, हामीलाई सम्मान पनि गर्नुप¥यो  । अहिले सम्म द्वन्द्वपीडित भने र जहिले पनि अपहे लित हुनुपरे को कुरा आएको छ । हिजो हाम्रो मान्छे ले यो गदान ग¥यो वा ज्यान गुमायो या अंगभंग भए वापत राज्यले हामीलाई सम्मान ग¥यो भन्ने कुरा आयो भने मात्रै विगत बिर्सिन सकिन्छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यस् तै पे न्सन सुविधा, आरक्षणको कुराहरुजस्ता नौ ला कुराहरुको सुझाव आएको छ । हामी त्यसलाई लिपिबद्ध गरे र पीडितहरुको सुझाव अनुसारै परिपूरण नीति बनाउने तयारीमा छौ ं ।
बे पत्ताहरुलाई मृतक भने र बे पत्ता आयो गले पीडित परिवारलाई पत्र पठाएको छ, अब तपाइहरुले छानबिन गर्नुहुन्छ त ?
हो  । बे पत्ता आयो गले चार सय १५ वटा उजुरीमा व्यक्ति मृत्यु भएको दे खिएका कारणले बे पत्ता आयो गको क्षे त्राधिकारभित्र नपनेर् भएकाले सत्यनिरुपणको क्षे त्राधिकारभित्र पनेर् भने र हाम्रो मा पठाइसक्नुभएको छ । यस विषयमा पीडितहरुको तर्फबाट आक्रो श पो खिएको छ । बे पत्ता आयो गले पनि अहिले गल्ती भयो कि भन्ने स् वीकारे को छ । तर उहा“हरुबाट लिखितरुपमै हाम्रो क्षे त्राधिकारभित्र पनेर् भने र आएको कारणले तपाइ“हरुमार्फत जानकारी गराउन हामीले चारजना सदस् यहरुले विभाजन गरे र त्यो फाइल हामीले नै अनुसन्धान अधिकारी भएर छानबिन गरिराखे का छौ ं । त्यसै ले ती फाइल बे पत्तामा हो भने र फर्किन्छ कि साच्चिकै सत्यनिरुपण आयो गको क्षे त्राधिकार ग्रहण गर्छ भन्ने कुराका लागि मात्रै पनि आफै अनुसन्धान अधिकारी आफै भएर छानबिन गरिराखे का छांै  । त्यसको प्रतिवे दन छिट्टै आयो गमा बुझाउने तयारीमा छौ ं । त्यसले गर्दा बेपत्ता आयो गले पठाएका ती फाइलहरु पनि कतिपय टिआरसीको निर्णय भएर फे रि फर्किन सक्छन् । कतिपयरुपमा त्यो कमजो री भएको दे खिन्छ । खासगरी उहा“हरुले मृत्यु दर्ता, शान्ति मन्त्रालयको रे कर्ड, इन्से कलगायतका रिपो र्टहरुको आधारमा चाहि“ मृतक भन्ने पाइएकाले मृतक भने र हामीकहा“ पठाउनुभएको छ । उजुरीकर्ताहरुको कुरा के छ भने हामी त राहत लिनका लागि पो मृत्यु भने का थियौ ं । तर मे रो मान्छे त बे पत्तै हो  । कहा“ मृतक भन्न पाइन्छ भन्ने छ । त्यसै ले के कारणले त्यो उजुरी बे पत्ता आयो गमा गयो  ? किन सत्यनिरुपणतिर आएन ? आधार के थियो  ? किन उहा“हरुले मृत्यु दर्तालगायत प्रमाणहरु मृतकका रुपमा रहे को यो कुराको जा“चबुझ गरिसके पछि यदि वे पत्ता आयो गकै क्षे त्राधिकार ग्रहण गनेर् भए हामी फिर्ता पठाइदिन्छौ ं । वे पत्ता आयो गले बे पत्ताकै रुपमा छानबिन गर्छ । हो इन सा“च्चिकै मृतक नै दे खिने तथ्य पनेर् फाइलहरु हामीले नै छानबिन गछौर् ं । त्यसले गर्दा अहिले चार सय १५ वटै फाइल छानबिनको चरणमा छन् ।
पीडितहरुमा निराशा अलि बढी भे टिन्छ । आयुक्तको हिसाबले के ही भन्नु छ ?
निराशा पीडितहरुमा त स् वाभाविक नै छ । निराशा हामीमा पनि छ । हामी आफै सदस् य आयुक्त भएर के ही समय अगाडि एक महिना अगाडि यहा“ले भे ट्नु भएको भए अकोर् पटक तपाइ“स“ग भे ट्दा आयुक्तको रुपमा हुन्छु कि हुन्न भन्ने उत्तर दिन्थे हु“ला । तर आजको मितिमा त्यो भन्ने अवस् था छै न । कम्तिमा एक वर्ष अझै काम गर्छु भने र लागे को छु । त्यसका आधारहरु के हुन् भने विगतमा सरकारको तर्फबाट बे वास् ता नै गरिएको हो  । हाम्रो त्यसमा आक्रो श छ । हामीलाई स्रो त साधन जे चाहिन्छ त्यो हामीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । त्यो वातावरण भयो भने न बल्ल आयो गले काम गर्न सक्छ । हात खुट्टै बा“धे र त आयो गले कसरी काम गर्न सक्छ ? त्यसले गर्दा त्यो कमिटमे न्ट सरकारस“ग लिएका छांै  । नया“ सरकारले हामीलाई त्यो खालको प्रतिबद्धता गरे को छ । व्यवहारमा हे र्न अझै बा“की छ । संके त राम्रा छन् । जुनखालको तदारुकता र रे स् पो न्स दे खाइएको छ त्यो आशालाग्दो नै छ । तर हे र्न बा“की छ किन भन्दा यो मुख्यतः ऐ न संशो धनलगायतका कुराहरु पनि हाम्रो अडान हो  । त्यो चाहि“ आयो गको म्याद थप्ने विषयकै प्रतिस् थापन विधे यक झण्डै ४५ दिनभित्र संसदमा प्रवे श गरिसक्नुपनेर् हुन्छ । त्यो बे लामा कस् तो विधे यक जान्छ । त्यतिबे लादे खि नै सरकारको रे स् पो न्स थाहा हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकार पो जे टिभ भयो भने काम गनेर् वातावरण बन्छ आशा छ त्यस्तो अवस्था आउने छैन । एक डे ढ वर्षमा सबै काम सम्पन्न हुने दिशामा पुग्छ । हो इन भने त आक्रो श पीडितहरुको मात्रै हो इन मे रो पनि हुने छ । स“गस“गै आक्रो श पो ख्ने काम हुने छ ।
पदाधिकारीको हिसाबले त्यो आशा दे ख्नुहुन्छ तपाइ ?
अहिले त हामीले जे बुझे का छौ ं यो राज्यको दायित्व हो  । राज्य यसबाट उम्कन नै नसक्ने ठाउमा छ । उम्किनै मिल्दै न । यसबाट पन्छिनै मिल्दै न । ६० हजार उजुरी दराजमा थन्क्याउनका लागि हो इन ती उजुरीहरु छानबिन गर्नका लागि हो र पीडितलाई सम्बो धन गर्नका लागि हो  । राज्य पन्छिन सक्ने र राजनीतिक दलहरु पन्छिन सक्ने ठाउ“ छै न । उहा“हरु हारथाक भइसके र अब आयो गको शरणमा आए हामी सहयो ग गछौर् ं । आयो गले जस् तो सुकै छानबिन गर । हामी मान्न तयार छांै भनिरहनुभएको छ । यो परिणाममा गयो भने अब धे रै लामो पर्खाइमा जानुपनेर् अवस् था आउने छै न । हामी पनि त्यो आशा र भरो साका साथ फे रि नया“ जो श र जा“गरका साथ काम गरिरहे का छौ ं ।
Previous: खड्काको स्वास्थ्यलाभका लागि प्रार्थना
Next: पर्यावरण र जैविक विविधता, जडीबुटीको महत्व र अवस्था